Kutumira Zvinodhura | Yangu Mota Kunze
Zvichienderana nekuti mota yako iri kupi pasi pano inoshandura mutengo wakazara wekutakura. Asi mhando yekutakura inoshandiswa inogona zvakare kukanganisa zvakanyanya mutengo wekunze. Yedu makotesheni ari bespoke kune zvako zvemunhu zvaunoda.
Mota yako iripi?
Kazhinji kutaura, iko kure kure mota kuri, iyo yakawanda ichaita mutengo.
Dzimwe nyika senge United States inodhura zvakanyanya pakufambisa kubva kuWest Coast vs East Coast uyezve kune dzimwe nyika uko mota iri kutakurwa pachiteshi chisinganyanyo shandiswa.
Tine runyorwa rweanodhura emachiteshi uye fambisa mota yako kune imwe yenzvimbo idzi kuti uve nechokwadi chekuti nzira yekufambisa inoshanda kwazvo yashandiswa.
Pazvinokwanisika mota yako inotumirwa nedzimwe mota kuti ipe iyo yakanakisa kukosha kwemari. Isu tinoshandawo padhuze nevatinoshanda navo kuti tiwane iwe mutengo wakanakisa kana uchitumira mota yako.
Nekuda kwehuwandu hwedzimotokari dzatinotakura kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemachiteshi tichagara tichisimbisa pazvinogoneka.
Yangu Mota Kunze sebhizimusi inopa izere musuwo kunyoresa sevhisi sevhisi saka isu tinogara tichiedza kuchengeta mitengo yakaderera sezvinobvira iwe.
Dzimwe nyika senge South Africa dzinoda rimwe basa kujekesa mota. Uyu mutengo waungangodaro usina kuziva paunenge uchifunga kutumira mota yako kuUnited Kingdom.
Isu tine rakakura network yevanowirirana netsika vanogona kubatsira nemaitiro aya.
Marii yaunofanira kubhadhara iwe?
Kutumira mota chikamu chemutengo unobatanidzwa mukuunza mota kuUnited Kingdom asi panogona kuve nechinodiwa chekubhadhara mutero wemotokari.
Kuunza kubva kuEurope
Kuunza kubva kunze kweEurope
Kuenda kuUK - Kana iwe uri kuenda kuUK uye uchida kuuya nemotokari yako newe haufanire kubhadhara chero mutero wekutenga kana VAT. Izvi zviri kukupa kuti uve nemotokari kwemwedzi inopfuura mitanhatu uye wakagara kunze kweEU kwemwedzi inopfuura gumi nemiviri. Tinoda invoice yako yekutenga kana gwaro rekunyoresa kuratidza urefu hwemuridzi wemota uye nemwedzi gumi nembiri yekushandisa bhiri, chirevo chebhengi kana chibvumirano chekutenga / chemba kuratidza nguva yawakagara munyika.
Kana mota dzakavakwa pre 1950 saka dzinobva dzango pinda padanho rekare re zero zero basa uye 5% VAT.
Kuunza mota pasi pemakore makumi matatu ekuberekwa
Yakagadzirwa kunze kweEU - Kana iwe ukapinza mota kubva kunze kweEuropean Union (EU) iyo yakavakwawo kunze kweEU uchafanirwa kubhadhara 10% yekubhadhara mutero uye 20% VAT kuti ubudise kubva kuUK tsika. Izvi zvinoverengerwa pamari yawatengera mota munyika yauri kuendesa kunze.
Yakagadzirwa mukati meEU - Kana iwe ukapinza mota kubva kunze kweEU iyo yakatanga kuvakwa muEU semuenzaniso Porsche 911 yakavakwa muStuttgart, Germany. Iwe unofanirwa kubhadhara yakaderedzwa yakadzikira chiyero chebasa rinova £ 50 uyezve 20% VAT kuti ubudise iyo kubva kuUK tsika.